Home Wararka Fatahaad barakac dhalisay oo ka socota magaalada Jowhar
Fatahaad barakac dhalisay oo ka socota magaalada Jowhar
Waxaa ka bilaawday magaalada Jowhar Fatahaad. Wabiga Shabeelle ayaa xalay fatahaad ka geystay deegaanada Moyko iyo Baarey oo dhaca duleedka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana maanta socda dadaallo xoog leh oo ay wadaan maamulka magaalada Jowhar iyo kan gobolka Shabeellada Dhexe, si loo xakameeyo fatahaada uu bilaabay wabiga Shabeelle.
Sida ay sheegayaan dad ka qaxaya deenagada uu saameeyay Fatahaada, Deegaanka Moyko oo qiyaastii 1-KM koonfur bari ka xiga Jowhar ayuu fatahaada ugu badan xalay ka geystay wabiga Shabeelle, waxayna biyaha ka fatahay wabiga xireen wadooyinka soo gala deegaanka Moyko, iyagoo saameyn xoog leh u geystay guryo iyo goobo ganacsi oo deegaanka ku yaalla.
Magaalada Jowhar ayey soo gaareen biyaha ka soo fatahay halka wabigu ka maro deegaanka Moyko, dhanka kale deegaanka Baarey oo qiyaastii 5-KM waqooyi ka xiga caasimadda HirShabeelle ee Jowhar ayuu xalay fatahaad kale ka geystay wabiga Shabeelle. Boqolaal qoys oo ku noolaa deegaanka Baarey ayaa guryahoodii ka barakacay, waxayna dadka deegaankaas fatahaadu ku bilaabatay gelinkii dambe ee shalay, waxayna biyaha ka fatahay halka wabiga Shabeelle uu ka maro deegaanka Baarey ay hadda gaareen laamiga isku xira magaalada Jowhar iyo garoonkeeda diyaaradaha.
Maxkamadda Ciidamada oo shaacisay qofkii ka danbeeyay dilkii Shiikh Cali Dhere
Kheyre Ma Hawiyenimo ayuu kaga Baxsan Doonaa Dembiyadii Qaranjabka ahaa ee...